विकासलाई डाँडाले छेक्दैन हेर्नुहोस यो अभुतपूर्व भिडियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विकासलाई डाँडाले छेक्दैन हेर्नुहोस यो अभुतपूर्व भिडियो
डिसी नेपाल , १८ आश्विन २०७५
एजेन्सी । विकास गर्न डाँडाले छेक्दैन । अथवा प्राकृति अवस्था विकासको बाधक होनइ । आवश्यकता छ त केवल सोँच, योजना र कार्यावयन गर्ने इच्छाशक्तिको । यी तीन तिज हुने हो भने जे पनि सम्भव छ।
नेपालमा अहिले समृद्धिको नारा एकदमै विक्रि भएको शब्द हो । तर, समृद्धिका लागि कस्तो सोँच छ, त्यो सोँच पूरा गर्ने योजना कस्तो छ । र त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कत्तिको छ । यही प्रश्नको उत्तर फेला परेसम्म नेपालको समृद्धि सायद सम्भव छैन ।
तर यहाँ हामी देखाउँदै छौं, विश्वमा प्रकृतिलाई मानिसले कसरी जितेको छ भन्ने एउटा अभुतपूर्व उदाहरण । यो यूरोपमा बनेको एक राजमार्ग हो । टर्कीको स्टेट रोड डी ४०० । यसले टर्कीका डाँडाकाडा विकासका बाधक होइनन् भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको छ । हेरौ यो भिडियो ।